Jerry Rakotoarijaona. Ilaina amin’ny tany tena demokratika ny mpanohitra saingy mila apetraka ny hoe inona no ataony ary iza no toheriny ? Ny tena fanoherana dia ny fitondrana ny atao hoe fifandanjan-kery. Izany hoe ny mpanohitra no tokony ho ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe “contre poid” an’ny mpitondra ka raha tena mahay mihaino ny mpitondra dia ny mpanohitra azy no tena lasa mpanolotsainy satria ny hevitra entin’ny mpanohitra no entiny hanitsiany ny lalan-kizorany, hoy hatrany ity filohan’ny VAR ity. Heveriko, hoy izy, fa mila miresaka anefa mialoha an’izay ny samy mpanohitra mametraka an’izay tena hitarika azy ireo.